UMIDIGI BISON x10 usoro: nguzogide na ezigbo ọnụ ahịa | Androidsis
Cristian Garcia | | Mobiles
Akara ekwentị mkpanaaka, UMIDIGI, na -ewepụta usoro ekwentị ọhụrụ ya siri ike, nke ọ kpọrọ usoro BISON X10. Ọbụlagodi na ị chere na nguzogide ahụ adabaghị na ịdị mma, n'isiokwu a nke ị ga -ahụkwa onyinye dị oke elu iji jide ya, anyị ga -akọwa na nkwenye a abụghị eziokwu ma ọlị. Ebe ọ bụ na n'usoro ekwentị ọhụrụ a, ha ahọrọla imepụta oke, ụdị ọgbara ọhụrụ nwere njirimara teknụzụ dị ka ahịa si dị, na -enweghịkwa ike iguzogide ihe niile na -agafe n'uche gị.
Usoro ekwentị ọhụrụ UMIDIGI nwere ngwaọrụ BISON X10 na BISON X10 Pro, nke nwere ndị nrụpụta Helio P60, asambodo iguzogide (dịka anyị niile na -atụ anya) IP68 / IP69K na ezigbo batrị 6150 mAh. Mana ka anyị ghara ịtụ anya maka na anyị ga -ekwu maka ihe a niile ma emechaa nye gị njirimara ya niile. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe anyị chọrọ ịtụ anya bụ na a ga -enwe launching enye onyinye n'etiti October 11 na 13: usoro ọhụrụ BISON X10 ga -amalite site na € 100 Ọ bụrụ na ị were uru zụta ha site taa. Ọnụahịa dị oke mma maka ekwentị mkpanaaka njirimara ndị a.
1 UMIDIGI BISON X10 na BISON X10 Pro: atụmatụ nke usoro mkpọtụ ọhụrụ sitere na UMIDIGI
1.1 Ndụ batrị
1.2 Na ihe nhazi, kedu ka ọ dị?
1.3 Njirimara ndị ọzọ nke UMIDIGI X10
2 Hà bara uru? Echiche ikpeazụ
UMIDIGI BISON X10 na BISON X10 Pro: atụmatụ nke usoro mkpọtụ ọhụrụ sitere na UMIDIGI
Ihe na -amasị anyị nke ukwuu na nke ahụ pụtara ìhè na usoro ekwentị ọhụrụ a na -eguzogide ọgwụ sitere na UMIDIGI bụ na imewe ya, dịka anyị kwuru n'elu, abawanyela nke ukwuu. Anyị na -atụ anya mgbe niile na ụdị ekwentị a ga -ewepụta atụmatụ adịchaghị mma, mana na nke a, akụkụ azụ abụọ na -enwe mmetụ dị mma nke masịrị anyị. Ya mere, ị gaghị enwe ike ịdọrọ ekwentị a naanị maka ọrụ gị ma ọ bụ ugwu, ọ nwere ike bụrụ isi ekwentị gị ma na -enwu na emume ọ bụla kwa ụbọchị.
N'etiti BISON X10 na BISON X10 Pro enwere ihe dị iche na usoro nke imewe, ebe ọ bụ na nke mbụ nwere mkpuchi azụ nke ejiri AG matte fiberglass na paịlị rọba tinyere okpokolo agba iji nweta ike, nke abụọ na -ejikwa roba na -emepụta ihe. mpe mpe akwa na akụkụ ọla. Ọ bụghị na otu na -eguzogide karịa nke ọzọ, ha na -agbanwe naanị n'ihe gbasara imewe mana Ha abụọ nwere nkọwa nguzogide IP68 na IP69K, yabụ ịkwesighi ichegbu onwe gị.
Ikekwe otu n'ime ihe kacha echegbu gị bụ batrị, ebe ọ bụ na ịga njem na -egosi inwe obere ego na nke a nwere ike bụrụ ihe dị mkpa. Mana ọ bụ na ebe ahụ anyị adịghị mkpụmkpụ, n'ihi na ha abụọ nwere ike ịdị ole na ole 550 awa na njikere, na iji ya nkịtị yana ihe dịka awa 52 na oku na -aga n'ihu. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere ihe kpatara ị ga -eji gbaa vidiyo, ị ga -enwe awa 28 nke batrị iji kpọọ vidiyo na ihe dị ka awa 15 nke ntụrụndụ ma ọ bụrụ na ị rara onwe gị nye igwu egwuregwu. Ịsụgharị ihe ndị a niile n'ime ụbọchị, ị ga -eji ihe ndị a were ihe dị ka ụbọchị abụọ nke ndụ batrị. Agbanyeghị na anyị amaralarị na a na -eme atụmatụ ya oge niile yana ojiji ọ bụla dị iche. N'ọnọdụ ọ bụla, ụgwọ batrị dị oke ọsọ.
Na ihe nhazi, kedu ka ọ dị?
Helio P60 bụ onye nrụpụta dabere na ihe anyị ga -akwụ maka ekwentị, mana ezuru ọha nke chọrọ ekwentị mkpanaka na -eguzogide ma dịkwa mma. Ọ bụ ihe ịga nke ọma. Atụla anya nnukwu ihe mana onye nrụpụta anyị nwere ike imesi gị obi ike na ọ na -arụ ọrụ nke ọma na cores 8 ya. Dị ka nke ahụ ezughi, ọ na -abịa na 4GB Ram nke na -enyere gị aka inwe arụmọrụ dị mma na netwọkụ mmekọrịta, ngwa egwuregwu vidiyo, WhatsApp na ngwa ọdịnala ndị ọzọ anyị nwere ike iji n'ụbọchị anyị ruo ụbọchị. Ị gaghị ahụ nsogbu ọ bụla maka ịnwe ihe nhazi etiti.
Nchịkọta bụ na maka mwepụta mmalite anyị nwere, anyị ga-achọta ihe nrụpụta nke na-apụ apụ n'okporo ụzọ nke ga-edozi ọnọdụ ọ bụla, nke n'ikpeazụ bụ ihe anyị na-achọ. Kedu ihe ọzọ Anyị na -emeri na ọ naghị eme ka ekwentị dị oke ọnụ Nke ahụ gbakwunyere n'otú anyị si ekwu, onyinye mwepụta, na -atọ ụtọ nke ukwuu.
Njirimara ndị ọzọ nke UMIDIGI X10
Anyị enweghị ike mechaa n'ekwughị maka nchekwa ma ọ bụ igwefoto ya n'ihi na gbasara nke mbụ, enwere ọdịiche dị n'etiti ụdị. Na BISON X10 ị ga -ahụ nchekwa nke 64GB, ebe n'ime X10 Pro ị ga -enwe 128GB, mana n'ezie, nke a bụkwa ihe na -eme ka ọnụ ahịa ya bawanye. N'ọnọdụ ọ bụla, ekwentị mkpanaka abụọ nwere ohere ịgbakwunye kaadị micro SD nke ruru ebe nchekwa 256GB, yabụ na ọ gaghị abụ nsogbu.
Maka igwefoto, ụdị abụọ ahụ na -ekerịta ya. Ha nwere igwefoto 20MP, igwefoto 8MP ultra-wide na ihu elele 120º., nke ga -enweta foto na vidiyo dị mma nke ruru 1080p na 30FPS na azụ, nke na -eme mkpebi dị oke mma ịse foto ndị ahụ ma ọ bụ vidiyo emeziri emezi. Maka igwefoto n'ihu, anyị nwere igwefoto 8MP, ihe bụ isi mana ọ na -enye anyị ezigbo mma maka oku vidiyo.
Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ihuenyo ya, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu maka ụdị abụọ ahụ. Ha na -abịa na 6,53 sentimita asatọ HD + mkpebi nke pikselụ 1600 × 720. Ọzọkwa na akụkụ akụkụ 20: 9 nke ga -adị mma maka ọdịnaya mgbasa ozi. Ọzọkwa, ụdị abụọ ahụ na -akwado nke ọma maka ọnụahịa ị ga -akwụ.
Sistemụ arụmọrụ gị bụ Ngwaahịa Android 11 ma nwee NFC dakọtara na Google Play, na mgbakwunye na njirimara ndị ọzọ a na -ahụkarị nke ọ bara uru ịkpọtụrụ dị ka jakị ekweisi, OTG maka ihe ndị ọzọ.
Hà bara uru? Echiche ikpeazụ
Ee ee. Onyinye mmeghe nke ga -adị site taa ruo Ọktoba 13 na -eme ka ekwentị nwekwuo asọmpi ọbụlagodi na ọ dabara n'ahịa ọ na -arụ ọrụ. Ọ na -agbaso n'akụkụ niile, ọ ga -enyekwa gị nchekwa nke ụdị ekwentị a ga -enye gị, na mgbakwunye na ụfọdụ agwa na njirimara dabara na ọnụahịa ya. Ọ bụ ama na -ekwenye ekwenye ma na -eguzogide na ụdị ọ bụla.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnọ n'etiti ịzụrụ ihe 1000 mbụ, ị ga -abanye eserese maka smartwatch, nke adịghị njọ ma ọlị. Ịzụta ya ị ga -pịa na njikọ njikọ a anyị na -ahapụ gị ma ị ga -ahụ n'ime ụbọchị ndị a Ntinye mmeghe maka ụdị usoro UMIDIGI BISON x10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » UMIDIGI BISON x10 usoro: nguzogide na ezigbo ọnụahịa